TLC ungumholi ezindabeni ukuhlaziywa ambalwa kanye semi ambalwa of ezithaka imithi eziyinkimbinkimbi, yemvelo, bezokwelapha, zobuchwepheshe, amakhemikhali kanye nezinye izinto eziningi. Izacile ungqimba chromatography futhi indlela kufinyeleleke kakhulu ukuhlaziywa mass ephelele cishe zakho konke amakilasi izidakamizwa.
Le nqubo ngokuhlala ngokuhlukana ukuhlaziya izinhlelo multi-ingxenye kabanzi laboratories ka ngokucacile ehluke kakhulu futhi isiqondiso: sanitary-epidemiological, wezilwane, agrochemical, ucwaningo, izinsalela, futhi iziteshi ukuvikelwa plant, Centre for Standardization kanye Bureau of Medicine Forensic.
Izinzuzo esemqoka mncane-ungqimba chromatography, esekelwe ukunyakaza eluent (analyte kuphela) e-ungqimba sorbent ngokusebenzisa ngakho ngokuthi amabutho capillary kukhona malula futsi easiness yenqubo chromatographic, ngezinga eliphezulu of ngokunemba yokuhlaziya nezindleko kuqhathaniswa eliphansi nezinto ezidingekayo.
TLC, kokuba ngezinga eliphezulu sensitivity (ephansi ukuthola komngcele) kanye selectivity, uvumela ukucacisa up 10-20 UG izinto siye ku 7% okuyinto kakhulu. Izacile ungqimba chromatography kungaba adsorption nokusatshalaliswa izinhlobo. Inqubo esetshenziswa kabanzi ukhetho lokuqala.
Ingqikithi indlela itholakala TLC izidakamizwa kuphela uhamba embhedeni sorbent futhi kokwabiwa izingxenye ezihlukahlukene ngokuvumelana nezici zabo ngabanye kanye izakhiwo. Iqiniso lokuthi amangqamuzana ukwakheka ezahlukene begodu nesakhiwo adsorbed (imali) futhi phezu kobuso esiqinile ipuleti chromatographic ehlukile. Ngakho-ke, eziyinkimbinkimbi multi-ingxenye izinhlelo kancane lihlukaniswa ngabanye.
Ukuhambisa ngesivinini ezahlukene eduze embhedeni sorbent, ngamunye isivele ahlukaniswe, yezingxenye akha chromatogram. Ngasinye endaweni umbala oluhambisana chemical ethize. izidakamizwa kungekho nto enemibala emihle nge ultraviolet ngaphansi kwethonya okuyinto sebuningini compounds uqale fluoresce, noma ngaphansi ekhethekile ukwelashwa Umbala reagent.
Phakathi zanamuhla nezindlela kohlaziyo GLC ivelele. Le ndlela libhekene ngokwahlukana analysis besebenzisa, njenge-ejenti sorbing ketshezi ekhethekile nonvolatile, lapho impahla oluyimpuphu Ceramic is wetted. Futhi njengoba medium ukushayela elisetshenziswe lapha ezahlukene amagesi inert. Le ndlela iphumelela kakhulu lapho befunda Izingxube eziyinkimbinkimbi eziqukethe amakhulu izingxenye ezahlukene.
Enye yesimanje indlela liphenya ukubunjwa izinto eziyinkimbinkimbi chromatography liquid. Isici eyinhloko yalo indlela olugxile ukwehlukana izingxenye ngabanye ngokusebenzisa umehluko ukusatshalaliswa yabo phakathi ezithathekayo (eluent) bese ilungiswe (adsorbent) izigaba. Le ndlela ibizwa avame ukusetshenziswa ukuhlaziywa compounds ahlukahlukene organic (izithasiselo zokudla, imithi yokubulala izinambuzane, ubuthi ahlukahlukene, njll). Futhi, indlela chromatographic enjalo isetshenziswa ukufunda ukulawula izinga imikhiqizo zemithi, ekutholweni kwezidakamizwa uketshezi begazi, kanye nezinye ukuhlaziywa acid acid.
Yini ehlukanisa isikhungo machining, CNC metal?
Ukwethula Machine: Ukubukezwa, tinkhulumo, Ukucaciswa, izici ukusetshenziswa
UKUSETSHENZISWA: izifundo ayimpoqo ukuhlolwa
Indlela yokuphatha ukuguguleka komlomo wesibeletho kanye nezinye izifo ezithintekayo
Visa kuya Czech Republic bebodwa: i ngokumelene
Kuyini pestis? Nini futhi kanjani ukuyisebenzisa?
Ukuvimbela isifo sikashukela - iseluleko kulabo engozini
Piston futha uketshezi: inhloso Umgomo we operation
Sand-namatshana ingxube: izici